AFGHANISTAN: Askar ka carartay Talibaan oo ka gudubtay xadka Tajikistan – Calanka.com
AFGHANISTAN: Askar ka carartay Talibaan oo ka gudubtay xadka Tajikistan
In ka badan kun askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan aya u baxsaday dalka deriska la ah ee Tajikistan, kadib iska horimaad dhexmaray iyaga iyo xooggaga Taliban, sida ay sheegeen mas’uuliyiin ka tirsan dalkaas.
Saraakiisha ilaalada xuduudda ee Tajikistan ayaa sheegay in askartaas ay dhinacooda u soo tallaabeen si ay “naftooda u badbaadiyaan.”
Todobaadyadii la soo dhaafay, xooggaga Taliban ayaa waday dagaallo culus oo ay ku qabsadeen deegaanno horleh. Arrintan ayaa loo aaneynayaa ka bixitaanka ciidamada NATO ee laabankii sano ee la soo dhaafay ku sugnaa Afghanistan.
Xilli inta badan ciidamada NATO ay dalkaas ka baxayaan ka hor bisha September ayaa waxaa jira walaac ah in burbur uu qarka u saaran yahay milateriga Afghanistan.
Heshiis dhexmaray Taliban iyo xulafada Maraykanka ayaa dhigaya in ciidamada ajnabiga ah laga saaro dalkaas, taa bedalkeedana uusan ururkaas u oggolaan xooggaga Al-Qaacida iyo mintidiinta kale inay saldhigyo ka sameystaan deegaannada uu gacanta ku hayo.
Taliban ayaa ku diiday inay joojiso dagaalkeeda ka dhanka ah ciidamada dowladda Afghanistan, waxaana uu ururkaas hadda gacanta ku hayaa saddex meelood meel dhulka dalkaas.
Hase yeeshee madaxweynaha Afghanistan, Ashraf Ghani, ayaa ku adkeysanaya in ciidankiisa uu u babac-dhigi karo khatarta uga imaanaysa Taliban. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in askar badan ay u baxsadeen xuduudda Pakistan iyo Uzbekistan si ay uga cararaan dagaalka.
Dhowr jeer oo hore ayay askar ka tirsan ciidamada dowladda Afghanistan waxa ay u carareen dhanka Tajikistan, waxaana la rumaysan yahay in tirada askartaas ay hadda ku dhawdahay 1,600.
Wakaaladda wararka ee Tajikistan, Khovar, ayaa sheegtay in askartan u dambeysay ay xuduudda ka soo tallaabeen subaxnimadii Isniinta, kadib dagaal ay habeenkii Axada la galeen Taliban.
Gobollada Badakhshan iyo Takhar ee xuduudda la leh Tajikistan ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ka socday dagaal xooggan oo ay dagaalyahannada Taliban ku qabsadeen deegaanno badan. Mintidiinta ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa inay la wareegeen bar koontarool oo ay ciidamada Afghanistan ku lahaayeen xuduudda Pakistan.
Dalalka deriska la ah Afghanistan, gaar ahaan kuwa ku yaal bartamaha Aasiya, ayaa isu diyaarinaya qaxooti badan oo ku soo jaba, waa haddii ay dagaalladu sii socdaan.
Afhayeenka Taliban, Suhail Shaheen, ayaa BBC u sheegay in ururkiisa uusan mas’uul ka ahayn colaadda sii xoogeysatay todobaadyadii la soo dhaafay.
Waxa uu ku dooday in magaalooyin badan ay dagaalyahannadooda ku qabsadeen si nabdoon kadib markii ay ciidamada dowladda diideen inay dagaallamaan.
Xulafu uu Maraykanka hogaaminayo ayaa Taliban xukunka ka tuursan sanadkii 2001, kadib markii uu ururkaas diisay inuu soo dhiibo Osama Bin Ladin oo ururkiisa Al-Qaacida uu fuliyay weerarradii 9/11.
Taliban iyo Maraykanka ayaa wadahadallo toos ah billaabay 2018, waxaana heshiis ka bixitaanka dalkaas fuliyay madaxweynaha haatan ka arrimiya aqalka cad ee Joe Biden.
AFGHANISTAN: Khilaaf ba`an oo ka dhex taagan hoggaanka sare ee Talibaan
Khilaaf weyn ayaa ka dhex bilaabmay hoggaamiyeyaasha Daalibaan oo ku saabsan sida loo dhisayo dowladda cusub ee Afghanistan, sidaana waxa… Read More ›
Ra’isul wasaaraha dalka Haiti oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshaha dilkii madaxweyne Jovenel Moise
Dacwad-oogaha guud ee Haiti ayaa ka dalbaday garsooraha gacanta ku haya kiiska dilkii madaxweynihi hore ee dalka Haiti Jovenel Moise… Read More ›
VIDEO: Darawal dhibsaday jaam-ka waddooyinka oo isticmaalay waddo tareen – Birmingham
A man has been jailed after driving down the tracks near Duddeston railway station, following a British Transport Police investigation.
Kulan dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo r/wasaare Rooble oo natiijo la`aan soo idlaaday
Kadib kulan saacado badan qaatay oo shalay ilaa xalay u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Maxamed… Read More ›
AFGHANISTAN: Kooxda Taliban oo jirdil xun u geystay wariye iyo kaameriistihiisa
Weriyayaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xooggaga Taliban ay u geysteen jirdil iyo xarig kadib markii ay damceen inay… Read More ›